June 24, 2020 - Khitalin Media
အကျပ်အတည်းများလာပြီး စီးပွားလာဘ်လာဘ လိုအပ်လာရင် ..
June 24, 2020 Khitalin Media 0
ပှဲတှယေ့တွာမီးထှနျးနညျး(ဂါထာမီးထှနျးနညျး) ဒီလို လှယျလှယျကူကူနဲ့ သသေခြောခြာ အစှမျးရှိ စီရငျနညျးတှကေို တငျပေးဖို့ တာဆူခဲ့တာကွာပါပွီ။တငျမယျ့တငျ ပွညျ့ပွညျ့စုံစုံ တငျပေးခငျြတာကွောငျ့ အခြိနျတဈခုထိ စောငျ့ဆိုငျးခဲ့ရတာပါ။ ဒါက အငျးကှကျ စမကှကျမဟုတျပါဖူး။ဒါကွောငျ့ ရေးသားစဉျ တငျးကွပျတဲ့ စညျးစနဈတှေ မလိုအပျပဲ လူတိုငျးလှယျလှယျကူကူ စီရငျအကြိုးပွီးနိုငျပါတယျ။ အဓိက အနနေဲ့ကတော့ …. (၁)အကွတျအတညျးမြားတဲ့အခါ […]
ကျောက်ကပ်ဟာ ခန္ဓာကိုယ်ကို ဒုက္ခပေးနိုင်တဲ့အဆိပ်အတောက်တွေကို ဆီးအဖြစ်စွန့်ထုတ်ဖို့အတွက် လုပ်ဆောင်နေတဲ့ ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ကျောက်ကပ်ကိုထိခိုက်စေတဲ့ဓာတ်တွေအများအပြားပါဝင်တာကြောင့် ဆင်ခြင်ပြီးစားသင့်တဲ့အစားအစာတွေကတော့ ဒါတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ (၁) ထောပတ်သီး ထောပတ်သီးက အာဟာရကြွယ်ဝတဲ့အသီးတစ်မျိုးဖြစ်ပေမယ့် ပိုတက်စီယမ်ပါဝင်မှုပမာဏများလွန်းတာကြောင့် တော်ရုံသင့်ရုံမဟုတ်ဘဲ အလွန်အကျွံစားလိုက်ရင် ကျောက်ကပ်ကိုထိခိုက်စေတဲ့အပြင် ကြွက်သားနာကျင်ခြင်း၊ နှလုံးခုန်မြန်ခြင်း စတာတွေကိုပါဖြစ်စေပါတယ်။ (၂) အနီရောင်အသား အနီရောင်အသားမှာပါဝင်တဲ့ ပရိုတင်းဓာတ်က ချေဖျက်ဖို့ခက်တာကြောင့် […]
Fb သုံးနေတဲ့ ညီလေး ၊ ညီမလေး ၊ သားသား၊ မီးမီးလေးတွေ့ သိဖို့……ဖတ်ဖြစ်အောင်ဖတ်ထားပါ
Fb သုံးနေတဲ့ ညီလေး ၊ ညီမလေး ၊ သားသား၊ မီးမီးလေးတွေ့ သိဖို့ “Facebook သုံးရင်ဒါတွေ သတိထားပြီး ရှောင်စေချင်ပါတယ်” (၁)ပုံတွေခဏခဏ မတင်ပါနဲ့ ပုံတွေ ခဏခဏတင်ရင် လူတစ်ချို့က ကိုယ့်ကို တစ်မျိုးမြင်လာ နိူင်ပြီး မလိုလား အပ်တဲ့ လူမှုရေးပြဿ နာ […]
နေကြတ်ဖြစ်စဉ် ဖြစ်ပြီးနောက် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကံကြမ္မာ ပိုမို ကောင်းမွန်လာနိုင် ဟုဆို . . .
ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းက​နေကြတ်ခဲ့တဲ့အတွက်နက္ခတ်ဗေဒပညာအရ အနာဂတ်မှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကံကြမ္မာပိုမိုကောင်းမွန်လာမယ်လို့ မြန်မာနိုင်ငံနက္ခတ်ပညာသင်တန်းကျောင်း၊​ကျောင်းအုပ်ဆရာမကြီး​ ဒေါ်ကြည်ကြည်စိန်ကပြောပါတယ်…ဇွန်လ(၂၁)ရက် (၁၃)နာရီ (၄၅) မိနစ်မှာ နေကြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး နေကြတ်ချိန်ကို နက္ခတ်ဗေဒပညာနဲ့ တွက်ချက်ကြည့်ရာမှာအနာဂတ်မှာ မြန်မာပြည်ရဲ့ ရေကြောင်းလေကြောင်းလိုင်းတွေပိုမိုကောင်းမွန်လာမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်​…နေကြတ်လိုက်တဲ့အချိန် ကကန်လဂ်။ကန်လဂ်ဆိုတော့ ​လေကြောင်း၊ရေကြောင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ဂြိုဟ်ကြီးက မြင့်မြတ်တဲ့အနေနဲ့ကြီးသွားတယ်။ ကြီးသွားတဲ့ အတွက်ကြောင့်မို့ နိုင်ငံတကာလို ကိုယ်ပိုင်လေကြောင်းတွေ လေယာဉ်ကြီးတွေဝယ်ပြီးတော့ ကိုယ်ပိုင်တွေဖြစ်လာလိမ့်မယ် ကန်လဂ်မှာနေကြတ်သွားတာတော့ ရှိတဲ့ဂြိုဟ်တွေက အနေအထားအရ […]
ခြေစွယ်ငုပ်ခြင်းကို အလျင်အမြန် သက်သာပျောက်ကင်းစေနိုင်မယ့် နည်းလမ်းကောင်းများ …
ခြေစွယ်ငုပ်ခြင်းကို အလျင်အမြန် သက်သာပျောက်ကင်းစေနိုင်မယ့် နည်းလမ်းကောင်းများ ခြေစွယ်ငုပ်ခြင်းဟာ အဖြစ်များတဲ့ ကျန်းမာရေး ပြဿနာတခုဖြစ်သလို ခံစားရလည်းခက်ပြီး ပျောက်ကင်းဖို့လည်း အချိန်အတော်ကြာပါတယ်။ ခြေသည်းညှပ်ပုံ နည်းစနစ် မမှန်ကန်တဲ့ အခါမျိုးနဲ့ ကြပ်တည်းလွန်းတဲ့ ဖိနပ်တွေ ဝတ်ဆင်တဲ့အခါမျိုးမှာ အဖြစ်များသလို ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့ အခါမျိုးမှာလည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ ခြေစွယ်ငုပ်တဲ့အခါ အလျင်အမြန်သက်သာ ပျောက်ကင်းစေနိုင်ဖို့ […]
သမီးလေး မွေးထားသော မိဘတိုင်း နောင်တမရခင် ဖတ်ထားသင့်သော ပို့စ်လေးတစ်ခုကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်…
သမီးလေးကိုချစ်ရင်(သို့)သက်ငယ်မုဒိန်း.. လင်မယား၂ယောက်ချစ်ကြတယ် ယောကျာ်းကလဲ လူချစ်လူခင်တော်တော်များတယ်…သမီးလေးမွေးထားတယ်အခုဆို ၁နှစ်၃လ. ဖေဖေမေမေ မပီကလာပီကလာလေး ခေါ် တတ်ပြောတတ်နဲ့မိဘတွေအချစ်ပိုကြတာပေါ့ တနေ့ အဖေလုပ်သူက အလုပ် ညစာစားပွဲလေး လုပ်မှာမို့ မိန်းမ ရေ သမီး လေးကို တို့တွေ အပေါင်းအသင်းတွေကိုပြကြကြွားကြမယ်ပေါ့ မိဘတို့သဘာဝပါသားသမီးလေးပွဲထုပ်ကြတာက… ဆက်ပြောမယ်နော်….မိသားစုလိုက်ညစာစားပွဲကားမောင်းပြီးသွားကြလေရဲ့ သမီးငယ်လေးလဲ ဝူးဝူးဝါးဝါးအော်ဟစ်ရီမောပြီး မိသာစုလေးပျော်ရွှင်နေကြတာ…. […]
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကိုဗစ် ကို အာရုံစိုက်နေချိန် မေ့လျော့ပေါ့ဆ မနေသင့်သော နောက်ထပ် ရန်သူဟောင်း ဗိုင်းရပ်စ် တစ်မျိုိး
မြန်မာပြည်မှာ ရာသီတုပ်ကွေးရောဂါ စတင်ဖြစ်ပွားနေပြီး (၁၃) ဦး စတွေ့ – ယခုနှစ် ရာသီတုပ်ကွေးရောဂါ (Seasonal Influenza) ဓာတ်ခွဲနမူနာ စစ်ဆေးထားသူ (၁၈၃) ဦးအနက် (၁၃) ဦးတွင် ရောဂါတွေ့ရှိရကြောင်း ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန ဗဟိုကူးစက်ရောဂါ တိုက်ဖျက်ရေးဌာနခွဲမှ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါက်တာခင်ခင်ကြီးက ပြောကြားလိုက်သည်။ […]
အိမ်ဝင်းအတွင်းတွင် မစိုက်အပ်သောအပင်များနှင့် အိမ်ဆောက်တဲ့အခါ မဖြစ်မနေ သိထားသင့်တဲ့ အရေးကြီးတဲ့ အချက်များ
အိမ်ပတ်ဝန်းကျင်တွင် မစိုက်အပ်သော အပင်များ အိမ်ဆောက်ရက် ရွေးနည်း အိမ်ဆောက်လ ရွေးနည်း မသုံးအပ်သော သစ် (၈) မျိုး အိမ် ကျောင်း ဆောက်ရာတွင် မပြုအပ်သော အရာများ၊သစ်ပင် ပန်းမန်ဆိုတာ လူတွေအတွက် ကောင်းမွန်တဲ့ အရာပါ။ သဘာဝရာ သီဥတုကို သင့်တင့်မျှတစေသလို သတ္တဝါတွေကိုလည်း အကျိုးပြုစေပါတယ်။မိမိအိမ် […]